Fiidiyow cusub Apple Shot on iPhone 13. Tijaabooyinka VI: Sixirka Filimka | Wararka IPhone
Fiidiyow cusub Apple Shot on iPhone 13. Tijaabooyinka VI: Sixirka Filimka
Xaaladdan oo kale, shirkadda Cupertino waxay soo bandhigaysaa fiidiyow cusub oo ah Taxanaha "Shot on iPhone" kaas oo uu ku tusayo sida ugu badan ee aad uga faa'iidaysan karto "oo leh xoogaa dheeri ah oo waxyeello leh" iyo kamaradda ku jirta iPhone 13 -ka cusub iyo iPhone 13 Pro.
Ciwaan looga dhigay, Tijaabooyinka VI: Sixirka Filimka, fiidyowgan cusub ee Apple sii deysay ayaa muujinaya sida ugu wanaagsan ee looga faa’iidaysan karo kaamirooyinka xoogga leh ee lagu soo kordhiyay aaladda. Waxa cad in farsamooyinka qaarkood, kheyraadka qaarkood iyo rabitaan badan sawirro cajiib ah ayaa la qaadi karaa.
Waxaan halkaan ku wadaageynaa fiidiyowga ay daabacday Apple kaas oo ay ku muujinayaan awoodda iPhonekan marka loo eego kaamirooyinka sharraxaad iyo tabaha toogashada ee gaaban ee sheekooyinka sayniska:
Dong Hoon Jun iyo James Thornton waa la arki karaa iyagoo sharraxaya sida ay u duubeen sheekooyinkan sayniska oo kooban kaamerooyinka iPhone -ka cusub 13. Kuwani waa khubaro ku xeel dheer arrimaha sidaas darteedna waa caadi in natiijadu noqoto mid cajiib ah. Inteenna inteeda kale waxaan ka faa'iideysan karnaa qaar ka mid ah xeeladaha ka muuqda sawirradan fiidiyowyadeena, in kasta oo ay adag tahay in la gaaro heerarka laga helay qoraalkan gaaban.
Ololaha Apple ee “Shot on iPhone” wuxuu astaan ​​u ahaa fiidyowyada hal -abuurka iyo shaqada sanado badan, runtii aad bay ugu wanaagsan tahay dhinacyo badan waana taas marka lagu daro muujinta waxa lagu samayn karo kaamerada iPhone -ka xitaa haddii ay tahay ma aha qaabkii ugu dambeeyay ee la sii daayay. Fiidiyowyadan waxay muujinayaan shaqada weyn iyo xariifnimada dadka isticmaala iyo xirfadleyda ku sameeya noocaan gaagaaban taleefanka gacanta, wax sanado ka hor aan la malayn karin.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Terminalka IPhone » iPhone 13 » Fiidiyow cusub Apple Shot on iPhone 13. Tijaabooyinka VI: Sixirka Filimka
Hadda waxaa laga heli karaa Apple TV +, Duulaan, taxanaha sayniska ee cusub ee Apple
Sonos waxa uu ka shaqaynayaa sidii uu u wanaajin lahaa maqalka isagoo falanqeynaya calaamadaha wireless-ka